Inkathi Edinga Isineke
Isibalo Semibono 17 Izikhathi #Ukubekezela
Into Ebaluleke Kakhulu Endleleni Yokholo Yinkolo Engagudluki, Ngokulandela Isimo
Ukuze samukele isibusiso sobupristi bobukhosi eZulwini njengoba uNkulunkulu asithembisa, sidinga ukukhuthazela kuze kube sekupheleni ngokubekezela noma ngabe isimo sinjani, njengoba kudingeka silinde iminyaka eminingana ukuze sikhiqize izithelo ngemuva kokutshala isihlahla.
UKristu Ahnsahnghong noNkulunkulu uMama bathi, "Gcina Ukholo Lwakho Ngokubekezela"
Njengoba uNkulunkulu asifundisa ukuthi sifunde izifundo kulokho okwenzeka ku-Esawu, kuJobe, kuMose, naku-Aaron, amalungu eBandla LikaNkulunkulu agcina ukholo lwawo ngokubonga nokubekezela belalela amazwi kaNkulunkulu.
“Kepha lokho eninakho, kubambisiseni ngize ngifike. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni lowo ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe.” IsAmbulo 2:25-26
Imiyalo kaNkulunkulu Nothando